Momba anay - Quanzhou Jinjia Machinery Co., Ltd.
Quanzhou Jinjia Machinery Co., Ltd dia orinasam-barotra, an'ny Quanzhou Hongda Machinery Co., Ltd.
Niorina tamin'ny taona 1990 ny HONGDA, izay miorina ao Quanzhou, tanàna fantatry ny sinoa ampitan-dranomasina, manana tantara lava, toekarena mandroso ary tontolo iainana mahafinaritra. Fujian jinjia Machiery Co., Ltd dia sampana iray ao Hongda. Niorina tamin'ny taona 1990 ny orinasa, taorian'ny ezaka nandritra ny folo taona, ankehitriny dia orinasa mitana ambaratonga lehibe amin'ny milina fanaovana injeniera miaraka amina faritra maro any ambanin'ny zotra amin'ny roller roller, mpitatitra. roller, sprocket, idler ary rojo vy ary kiraro ny lalan-kaleha ary laza tsara.
Ny kalitao tsara dia fomban-drazana taloha an'ny orinasanay .Ny politikam-pahefana sy paikadinay hatrany no natao 'hahatongavana lafatra amin'ny tsara sy hahazoana fahafaham-po 100%'. Noho izany dia nampidirina ny fitaovana mandroso, ny talenta tena tsara no voaray ary ny mpiasa dia zarina amin'ny kalitao matetika. Ireo rehetra ireo dia manome antoka ny kalitaon'ny vokatray ary mitondra laza avo eo amin'ny mpanjifanay izay manome fototra mafy ho an'ny fiaraha-miasa.
Fanamafisana lehibe ihany koa no napetraka amin'ny serivisy sy varotra aorian'ny fivarotana, tambajotra iray feno ho an'ny varotra sy serivisy no natsangana eo amin'ny tsena eo an-toerana sy amin'ny Japon, Korea, USA, Kanada, EU, Azia atsimo atsinanana ary Middler aziatika firenena hanome serivisy mety, haingana sy tonga lafatra ho an'ny mpanjifa an-trano sy any ivelany.
Izahay, toy ny fanaonay hatrany, dia hanao ny ezaka rehetra hanomezana fahafaham-po ny filanao.